राष्ट्रवादी बन्नलाई के गर्न पर्ला भनेर म यसो घोत्लिन्छु। मलाई लाग्छ राष्ट्रवादी हुन ठूलै योगदान दिनुपर्छ, सानो तिनो काम गरेर हुँदैन। ठूला ठूला काम गर्नलाई म जस्तो झुत्रे भएर हुने भए किन चाहिन्थ्यो मन्त्री, र किन चाहिन्थ्यो प्रधानमन्त्री? अहो, प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै मलाई रमाईलो घटनाको याद आँउछ र फेरी राष्ट्रवादी हुन बडो सहज छ जस्तो लागेर आँउछ। राष्ट्रवादी भएर बाच्न पाए हुन्थ्यो भनेर त हजुरहरुले पनि सोच्नुहुन्छ होला नि, तर खै के खै के नमिलेको जस्तो, बेमेल चाँही छ है यो राष्ट्रवादी हुने कुरामा!
क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने, म एक विर गोर्खाली, शान्तिप्रेमी नेपाली, सगरमाथाको जस्तो उचो आत्मविश्वास भएको र बुद्धको जस्तो बुद्धिले भरिभराउ एक जाज्वल्यमान नेपाली हुम। त्यसमाथी पितापूर्खाको गौरवगाथा त गाएरै साध्य छैन: अरनिको, भृकुटी, ब्यास र तिनले छोडेका विरासत। योग, ध्यान, धर्मसंस्कृति – के चाँही कुरामा हामी अब्बल छैनौ? झनै हालसालै रामको ससुरालीबाट जन्मभुमीमा रुपान्तरित देश, भविस्यमा मण्डेला, गान्धि र आईन्टाईनकै जन्मभुमी ठहरिने खालका प्रमाणहरु भेटिन के बेर? हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीको वास्तविक क्षमता र महिमा भर्खर-भर्खर त बल्ल थाहा हुँदै छ। अहिले सम्म नेपालीले चान्स पाएकै थिएन त कसरी आफ्नो सामर्थ्य र हैसियत प्रदर्शन गरोस्!
यस्तो गौरवपूर्ण ईतिहास र उदाउँदो वर्तमान बोकेको नेपालको एक स्वतन्त्र नागरिक भईकन पनि जाबो राष्ट्रवादी हुनलाई ठूलो कुरा सम्झिने? मलाई आँफै देखि झनक्क रिस उठ्यो, तथापि म बुद्धको सन्तति, रिसाउन त भएन नि भनेर आफुलाई सम्हाँले। त्यत्तिकैमा मलाई एकदमै सजिलोसँग राष्ट्रवादी हुने आईडिया फुर्‌यो जसले मलाई देशकै प्रथम श्रेणीको राष्ट्रवादी बनाउने कुरामा म निश्चिन्त छु।
हिजो आज म भारतलाई बडो गाली गर्छु। नगरौँ पनि किन, मलाई राष्ट्रवादी, देशप्रेमी र पत्निको प्रमी हुनसमेत रोक लगाएपछी म मुख छोडेरै गाली गर्छु। आखिर विर गोर्खाली भएर त्यति पनि गर्ने ताकत नराख्ने भए गोर्खा राईफल्स किन भिर्नु, खुर्पेटो नै ठीक छ नि बरु। भिक्टोरिया क्रसको पगरी पाउन सक्नेले गाली गर्न नसक्दा ब्रिटिस सरकारले के भन्ला मलाई? त्यसैले हिजो आज म तन-मन र जिउ-ज्यान लगाएर गाली गर्छु। भारतलाई गाली गरेपछी बल्ल थाहा भयो, राष्ट्रवादी हुन के गर्न पर्ने रैछ। पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भनेर त्यसै बूढापाकाले भनेका होईनन् नि।
यो बर्ष निकै पानी पर्यो, खै किन हो अलमल्ल छु। थाहा भएन भनेर पनि के गुनासो गर्नु, बैज्ञानिक भाको भए पो – आफु परियो नवराष्ट्रबादी। राष्ट्रबादीलाई गाली गर्न जाने पुगिहाल्यो नि। जे होस् मेरो पदको उचाई बढाउन यो पानीले धेरै मदत गरेको छ – जसरी खोलाको सतह, बाढीको जियाडी र तराईको गहिराई बढाउन मदत गरेको छ। त्यै भारतले बाँध बाँधेर बाढी आको त हो नि, नत्र नेपालमा बाढी किन आँउथ्यो? बुद्धको देशमा बाढीको आतङ्क भारतको साजिस बाहेक अरु केही होईन। सुधीर शर्माले ‘प्रयोगशाला भाग २’ निकाल्न अब ढिला भईसक्यो।
तर म गाली मात्र गर्दिन भारतलाई, कृतज्ञता पनि प्रकट गर्छु बेला बेलामा। दक्षीण तिर भारतको ठाँउमा समुन्द्र भइदिएको भए कस्लाई गाली गर्न पाउँथे? ब्लू ह्वेल र डल्फिनलाई गाली गर्नु? पृथ्वीको तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिएपछी, समुन्द्रमा पानीको सतह बढेका बेला अलि अलि गरेर समुन्द्रले पनि त सिमा मिच्थ्यो होला। कस्लाई गाली गर्थेँ त्यति बेला? उता दुबईमा पाम आईल्याण्ड बनाएर समुन्द्रलाई नै उल्टो अतिक्रमण गर्ने सामर्थ्य त बा हुन्थ्यो वा हुन्थेन। भारत नभएको भए सुस्ता, लिपुलेक र कालापानीका नारा लगाउदै आफ्नै देशका टाएर बाल्ने, गाडी जलाउने, प्रहरीसँग ढुङ्गामुढा गर्ने, आफैले बालेको टाएरको धुवाँ पिउने, आदि अवसरहरु हामीले पाउँथ्यौ त?
प्रदेश-५ को राजधानी तय गर्ने बेलामा प्रदेश सांसदहरुले टेबल कुर्ची भाँचे भन्ने समाचार अझै सेलाएको छैन। हाम्रा सांसदले प्रदेशसभामा कुर्ची फोडे भनेर मलाई विश्वास नै लागेन, बुद्धको जन्मभूमी नेपाल, र त्यसमा पनि बुद्ध जन्मिएको जिल्लामै यस्तो हर्कत कदापि हुनै सक्दैन! त्यहाँ हाम्रा माननीयहरु पूर्ण रुपमा निर्दोष छन्। आखिर दक्षिणतिर क्षिमेकि नभएको भए कुरा अर्कै हुन सक्थ्यो। आफ्नै देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै नेपालीले तोड्न सक्छन? हुनै नसक्ने कुरा हो यो। दक्षिणकै साजिस हो यो।
धन्य प्रभु! दक्षिणमा भारत दिनुभएकोमा, यसले मलाई राष्ट्रवादी बन्ने प्रचण्ड अवसर दिएको छ। चान्स पाको बेलामा अवसर सदुपयोग नगरेर भो अब!